मोबाइल लिएर सुत्ने बानी छ ? सावधान ! | मोबाइल लिएर सुत्ने बानी छ ? सावधान ! |
उज्यालो प्रतिनिधि ८ भाद्र २०७७, सोमबार स्वास्थ्य/जीवनशैली
मोबाइल फोन जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ भन्दा फरक पर्दैन।
पछिल्ला दिनमा मानिस मोबाइलमा धेरै समय बिताउनमै व्यस्त हुन थालेका छन्। जुनसुकै समयमा पनि साथमा रहने मोबाइल खतरनाक हुने अनुसन्धानले देखाएका छन्। मोबाइलबाट निस्कने विकिरणले मानिसमा प्रजननदेखि स्वास्थ्यसम्म विभिन्न क्षेत्रमा असर गर्ने गरेको छ।
एक अनुसन्धानले माेबाइललाई राति सँगै लिएर सुत्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
चीनको इन्स्टिच्युट अफ एनबीसी डिफेन्स एण्ड सिन्गुहा युनिभर्सिटीका शोधकर्ताहरुले स्मार्टफोनबाट दर्जनौं खतरनाक ग्याँस उत्पन्न हुने बताउँदै यसलाई सँगै लिएर नसुत्न चेतावनी दिएका छन्।
अनुसन्धानकर्ताको एक समूहले लिथियम-आयन ब्याट्रीबाट निस्कने सयवटाभन्दा बढी विषालु ग्याँसको पहिचन गरेको छ। यसमा कार्बोन मोनोअक्साइड पनि समावेश छ । यस्तो ग्याँसले आँखा, छाला र नाकमा जलनको समस्या पैदा हुने गर्दछ । यो ग्याँसले वरिपरिको माहौललाई पनि ठूलो मात्रामा नोक्सानी पुर्याउँछ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... कोरोना परीक्षण नतिजा २४ घण्टाभित्र दिन स्वास्थ्य समितिको निर्देशन